Knowledge – Page3– Wun Yan
တစ်ချိန်မှာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ မှဲ့များ မှဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သီအိုရီတွေ မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ မှဲ့ဟာကံဆိုးခြင်းတွေကိုပဲ ယူဆောင်လာပေးတယ်လို့ အယူရှိကြသလို ကံကောင်းခြင်းတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတယ်လို့လည်း အယူရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့နောက်မှာ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ ရှိရမယ်လို့ လက်ခံထားကြဆဲပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရှေးလေ့လာဖော်ထုတ်ချက်များအရ အောက်ပါ ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။…
တစ်ချိန်က ဆင်းရဲလှတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူတွေ အိုလာရင် စွန့်ပစ်တဲ့ ဓလေ့မှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
တစ်ချိန်က ဆင်းရဲလှတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူတွေ အိုလာရင် စွန့်ပစ်တဲ့ ဓလေ့မှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဂျပန်ရိုးရာ ပုံပြင်လေးတစ်ခု ဖတ်ဘူးတယ်။ သိပ်လည်း ကြိုက်ခဲ့တယ်။ အမြဲလည်း မှတ်မိနေတယ်။ အခု အသက်ကြီးလာတော့ ဒီပုံပြင်လည်းဟာ အဓိပ္ပါယ် ပိုရှိလာတယ်။ ပိုပြီး တွေးစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပုံပြင်လေးက ဒီလိုပါ။ ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟာ…
သူများဆီက ပိုက်ဆံ ချေးငှားထားတယ် ဆိုရင်
သူများဆီက ပိုက်ဆံ ချေးငှားထားတယ် ဆိုရင် ကိုယ်အနားမှာ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ချမ်းသာရင် သူငယ်ချင်းတွေ ချမ်းသာရင် ပိုပီတိဖြစ်တယ် ။ ကောင်းမွေးဆိုးမွေး ခံယူဖို့ပါ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ ချမ်းသာမှမဟုတ်ဖူး ဆင်းရဲလဲ မိတ်ဆွေပါဘဲဗျာ ကူညီပါတယ် ကတိတော့ တည်ပါ ။ ၁။ ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ချေးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါ။ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ဇာတ်စုံခင်းပြမနေပါနဲ့။ ကြာပါတယ်။ မဟုတ်လည်း…
လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့ချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် အချက် (၅) ချက် ၁။ လူကြီးသူမရဲ့ ဆိုဆုံးမ စကားတွေကို နားငြီးသလို ခံစားရလိမ့်မယ်။ ၂။ မကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း အတုအယောင်တွေကို စိတ်ရင်းနဲ့ ပေါင်းသင်းလာတတ်ပါတယ် ၃။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီး တစ်ခု ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ ၄။ အပျော်ဘက်လိုက်ပြီး မကောင်းမှုတွေ ဆက်တိုက် လုပ်မိလာပါလိမ့်မယ်။ ၅။ စားစရာတွေကို ရုန်းကန် စားသောက်ရတတ်ပြီး…
သူဌေးတစ်ယောက် ဘဏ်ထဲသို့ ၀င်လာပြီး ချေးငွေဌာနမှ တာ၀န်ရှိသူကို တွေ့ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
အိန္ဒိယလူမျိုး တစ်ယောက် နယူးယောက် ဘဏ်ထဲသို့ ဝင်လာပြီး ချေးငွေ ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူကို တွေ့ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မန်နေဂျာ ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ သူဟာ အိန္ဒိယကို စီးပွားရေး အလုပ်ကိစ္စ တစ်ခုအတွက် ၂ ပါတ်ကြာ သွားရောက်ရန်ရှိပြီး ထိုကိစ္စအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ချေးလိုကြောင်း ပြောကြားပါတယ်။ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူမှ ငွေချေးရန်အတွက် အာမခံ ပစ္စည်းအချို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါတယ်။…
အချို့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေ ဆီဘယ်လို ခိုးသလဲဆိုတာ
အချို့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေ ဆီဘယ်လို ခိုးသလဲဆိုတာ ဆီဆိုင်တွေ ဆီမပြည့်တဲ့ ကိစ္စ အခုခေတ် ဆီပန့် တွေ က အီလက်တရောနစ် ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ် စံနစ်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားတာပါ အီလက်ထရောနစ် ဖလိုးမီတာ(flow meter) ကို အသုံးပြုထားတာပါ ဆီဖြည့်စံနစ်တွင် Setting များစွာပါဝင်ပါသည်။ Manual Setting များပါဝင် သလို Software Setting များလည်းပါဝင်ပါသည်။ ဆီမပြည့်ခြင်း ဆိုသည်မှာသတ်မှတ်…
အဆိုတော် ခင်ဝမ်းနဲ့ ခင်မောင်တိုးတို့ သီဆိုခဲ့ကြတဲ့ “ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်
အဆိုတော် ခင်ဝမ်းနဲ့ ခင်မောင်တိုးတို့ သီဆိုခဲ့ကြတဲ့ “ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ် “ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန်” ဆယ်လ်မွန်ငါးတွေဟာ ရေချိုမှာမွေးဖွားပြီး ရေငံ(ပင်လယ်)မှာကြီးပြင်းတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်တယ်… မိခင်ဆယ်လ်မွန်ငါးဥမှ (၃)လကြာမှာ ငါးသားလောင်းတွေအဖြစ်ထွက်လာပါတယ်.. ရေချိုမှာ ပျမ်းမျှ(၂)နှစ်ခန့် ကြီးထွားအောင် နေပြီးမှ ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆီ ထွက်လာပါတယ်.. ပင်လယ်ပြင်မှာ (၃)နှစ်ကြာရင် ကြင်ဖေါ်ရှာပြီး မိမိတို့မွေးဖွားရာ ရေချို အရပ်ဆီကို ပြန်ကြပါတယ်.. တချို့ဆယ်လ်မွန်တွေကတော့ ကြင်ဖေါ်မတွေ့နိုင်ပဲ ပင်လယ်သမုဒ္ဓရာထဲ (၅)နှစ်အထိ…
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဝဋ်ကြွေး (19) ချက်အကြောင်း
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဝဋ်ကြွေး (19) ချက်အကြောင်း ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိ ဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သင်ဟာကပ်စေးနှဲ…
ဘုရား ရှိခိုး ဦးချပုံ ဦးချနည်းနှင့် ရှိခိုးခြင်း သုံးမျိုး
ဘုရား ရှိခိုး ဦးချပုံ ဦးချနည်းနှင့် ရှိခိုးခြင်း သုံးမျိုး “ရှိခိုးဦးချပုံ ဦးချနည်း” ဘုရားနှင့် သံဃာတော်တို့ထံ ဆည်းကပ်ရှိခိုးသောအခါ ရိုသေစွာ လက်အုပ်ချီပြီးနောက် “နီး၊ ဝေး၊ ရှေ့၊ နောက်၊ မြင့်မောက်၊ လေညာ” ဟူသော အပြစ်ခြောက်မျိုးလွတ်သော နေရာ၌ နေ၍ ရှိခိုးပြီး လျှောက်ထားဖွယ် စကားတို့ကို လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်ထား နာယူပြီးလျှင် ရှိခိုးဦးချ၍ ပြန်ရမည်။ ပြန်သောအခါ…
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် တစ်လနဲ့ အလုပ်ထွက်ပြီး ရွာပြန်သွားတယ် အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့လား ဆိုတော့လည်း အဆင်ပြေတယ်တဲ့
မနေ့က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် တစ်လနဲ့ အလုပ်ထွက်ပြီး ရွာပြန်သွားတယ်။ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့လား ဆိုတော့လည်း အဆင်ပြေတယ်တဲ့။ ရွာမှာလည်း ဘာအလုပ်မှ မရှိသလို စားစရာလည်းမရှိဘူး။ အဖေကလည်း အလုပ်မရှိ။ အမေကလည်း ရောဂါသည်အလုပ်မရှိ။ အသက် ၂၀ ကျော် သမီးက အလုပ်ထွက်ပြီး အိမ်ပြန် သူတို့နေရာဝင်ပြီး စဉ်းစားရင်း ခေါင်းတွေ မူးလာတယ်။ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေရက် ထွက်ခဲ့တာ ချည်းပဲတဲ့။ အရင်ကဆို…